EU Yobatsira Zvirongwa zveDzidzo Munyika
HARARE — Gurukota redzidzo, Seneta David Coltart, vanoti rimwe remasangano anobatsira munyaya dzedzidzo pasi rose, reGlobal Partnership for Education, richatarisa neChitatu chikumbiro cheZimbabwe cherubatsiro rwemari yekudzidzisa zvekare varairidzi basa apo nyika iri kuenderera mberi nebasa rekusimudzira dzidzo munyika.
Vachitaura apo Zimbabwe yange iri kupihwa madhora mamiriyoni gumi nemanomwe ekusimudzira dzidzo pasi pechirongwa cheEducation Transition Fund pamwe nemadhora anodarika zviuru mazana makumi matanhatu ekutengera vana vadiki chikafu nesangano reEuropean Union, VaColtrat vati Zimbabwe yakaisa chikumbiro chemadhora mamiriyoni makumi maviri nematatu kusangano iri.
Vati vane chivimbo chekuti chikumbiro chavo, icho vakabatsirwa kuita nevamwe vavanoshanda navo muchirongwa cheEducation Transition Fund, chichabudirira.
Vati kana izvi zvichinge zvaitika zvinoreva kuti varairidzi vese munyika vachadzidziswa basa patsva sezvo kuve nemabhuku chete kusingabatsire vana kuti vabudirire muzvidzidzo zvavo.
Zvichakadai, mumiriri weEuroperan Union muZimbabwe, VaAldo Dell’ Ariccia, vati kutadza kupa mari kudzidzo kuri kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuri kudzorera kumashure nyaya dzekusimudzira dzidzo munyika.
Vati izvi ndizvo zviri kuita kuti sangano ravo ribatsire Zimbabwe kuti ikwanise kuti vana vese vawane zvidzidzo zvepuraimari sezvayakaronga pasi peMillenium Development Goal Number 2.
Vakasanobata chinzvimbo chemukuru wesangano reUnited Nations rinoona nezvevana muZimbabwe, VaGianfranco Rotigliano, vatiwo rubatsiro rwemari rwabva kuEU ruchashandiswa mukugadzirisa zvikoro, macheya nematebhuru pamwe nezvimwe zvinoita kuti varairidzi nevadzidzi varerukirwe muzvikoro.